Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.3.3 Nke na-adịghị emetụta
Ntube na nnukwu ihe odide data enweghi ike igbanwe omume.
Otu ihe ịma aka nke nchọpụta mmadụ bụ na ndị mmadụ nwere ike ịgbanwe àgwà ha mgbe ha maara na ndị na-eme nchọpụta na-ahụ ha. Ndị ọkà mmụta sayensị na-akpọkarị mmeghachi omume a (Webb et al. 1966) . Dịka ọmụmaatụ, ndị mmadụ nwere ike inyekwu mmesapụ aka n'ọmụmụ ihe nchọpụta karịa ọmụmụ ihe ọmụmụ n'ihi na n'oge gara aga ha maara nke ọma na a na-ahụ ha (Levitt and List 2007a) . Otu akụkụ nke nnukwu data na ọtụtụ ndị nchọpụta na-achọta nkwa bụ na ndị na-eme ihe n'ozuzu ha amaghị na a na-ewepụta data ha ma ọ bụ na ha amawo ihe ndekọ data a na ọ naghị agbanwe àgwà ha. Ebe ọ bụ na ndị na-eme ihe na- adịghị mma , ya mere, a na-eji ọtụtụ data nke nnukwu data na-amụ banyere omume ndị na-enweghị ike iji nweta ihe nhata ziri ezi na mbụ. Dịka ọmụmaatụ, Stephens-Davidowitz (2014) ji usoro ịgba agbụrụ na search engine chọpụta agbụrụ dị iche iche na mpaghara United States. Ndị na-adịghị ahụkebe na nnukwu (lee mpaghara 2.3.1) ọdịdị nke nchịkọta data ọchụchọ ahụ ga-esi ike site na iji ụzọ ndị ọzọ, dịka nyocha.
Otú ọ dị, adịghị arụ ọrụ, ọ dịghị eme ka o doo anya na data ndị a na-egosipụta kpọmkwem àgwà ma ọ bụ àgwà ndị mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, dịka otu onye na-aza ajụjụ na ọmụmụ ihe na-ekwu, "Ọ bụghị na enweghị m nsogbu, anaghị m etinye ha na Facebook" (Newman et al. 2011) . N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ ezie na ụfọdụ nnukwu ihe ọmụma data adịghị emetụ n'ahụ, ọ bụghị mgbe nile ka ha na-enwere onwe ha pụọ ​​na mkparịta ụka na-adịghị mma, ọdịdị nke ndị mmadụ chọrọ ịchọọ onwe ha n'ụzọ kachasị mma. Ọzọkwa, dị ka m ga-akọwa n'ọdịnihu n'isiokwu, omume ndị e weghaara na nnukwu ihe ọmụma data bụ mgbe ụfọdụ ihe mgbaru ọsọ nke ikpo okwu ndị nwe ụlọ, ihe m ga-akpọ algorithmic confounding . N'ikpeazụ, ọ bụ ezie na arụghị ọrụ na-aba uru maka nyocha, imechi omume ndị mmadụ na-enweghị nkwenye na mmata ha na-ebuli nchegbu gbasara usoro iwu nke m ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu na isi 6.
Ihe atọ ndị m kọwapụtara-nnukwu, mgbe niile, ma ọ bụ ndị na-adịghị emetụ n'ahụ-bụ n'ozuzu ha, ma ọ bụghị mgbe nile, bara uru maka nchọpụta mmadụ. Ọzọ, m ga-agbanye n'ikikere asaa nke nnukwu data-isi-enweghị ezu, na-enweghị mgbagha, onye na-abụghị onye nnọchianya, ntụgharị, algorithmically confounded, dirty, na na-echeba-na n'ozuzu, ma ọ bụghị mgbe niile, mepụta nsogbu maka nchọpụta.